GMMA-V2000 CNC igwe n'ihi efere beveling &-egwe ọka - China Shanghai Taole Machinery
GMMA-V2000 CNC igwe n'ihi efere beveling &-egwe ọka
Model No .: GMMA-V2000
Nzipu Ụbọchị: 2-3 ọnwa
GMMA-V2000 CNC igwe n'ihi efere beveling na-egwe ọka
GMMA-V2000 bụ ụdị CNC ụdị igwe n'ihi efere beveling &-egwe ọka usoro. Standard igwe na-arụ ọrụ dịgasị iche iche nke mwekota ọkpụrụkpụ 6-80mm, Bevel angel 0-80 ogo. Bevel obosara pụrụ iru 100mm.
Uru: Na nhọrọ maka ntuziaka, ọkara akpaaka, CNC akara, High ọsọ ruru 2 mita kwa min, Spindle strok ike, Bevel angel, bevel n'obosara, na yiri kwa nwere ike ahaziri dị ka chọrọ.
Model Mba GMMA-V2000 CNC efere beveling igwe
Spindle Speed 750-1400r / min
ndepụta Speed 0-2000mm / min
mwekota Obosara > 100mm
Bevel angel 0-80 ogo mgbanwe
ọrụ MKpọnwụ 2000mm
Custimized nhọrọ Dị ka kwa ahịa si bevel mkpa na efere nkọwapụta
Worktable Elu 800mm
Travel Space 4000 * 1700mm
ibu Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ 5600KGS GW 5800KGS
packaging Size 4000 * 1700 * 1700mm
2. ike hazie "V", "Y", "U", "J" na kwụ ịdị iche iche ụdị bevel nkwonkwo
5. Wide ọrụ nso na ahaziri nhọrọ izute niile bevel chọrọ.
Previous: GMMA-80A elu arụmọrụ akpaaka na-eje ije efere beveling igwe
Osote: GCM-R3T metal ihu rim chamfering igwe
n'akuku efere N'ihi igwe Machine
n'akuku efere Na igwe Machine
CNC igwe n'ihi efere beveling
CNC efere beveling igwe
High Oru oma Edge igwe Machine
Metal Edge igwe Machine
igwe Machine indexing efere
efere Edge igwe Beveling Machine
Portable igwe Machine
Portable Steel efere Edge igwe Machine
Steel Edge igwe Machine
Steel efere Edge igwe Beveling Machine